DAAWO SAWIRRO: Puntland oo maanta xukun ku riday Odayaal iyo Siyaasiyiin ku xirnaa magaalada Boosaaso | HalQaran.com
DAAWO SAWIRRO: Puntland oo maanta xukun ku riday Odayaal iyo Siyaasiyiin ku xirnaa magaalada Boosaaso
Boosaaso (Halqaran.com) – Puntland ayaa xukuno kala duwan ku riday Odayaal iyo Siyaasi muddooyinkii dambe ku xirnaay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.
Maxkamadda derejada kowaad ee gobolka Bari, ayaa Axaddii maanta xukunno isugi jira xabsi iyo ganaax lacageed ku ridday, siyaasi Muuse Cali Jaamac iyo odayaal kale oo mudda bil ah ku xirnaa magaalada Boosaaso, kadib markii ay Puntland ku dhaliileen Heshiisyo Maal-geshi oo ay kula jirto Shirkado laga leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta.
Maxkamadda ayaa saddex bilood oo xabsiya iyo ganaax lacageed oo dhan $500 oo Dollar, waxay ku riday Siyaasi Muuse Cali Jaamac, Nabadoon Cabdullaahi Yuusuf Buuxe iyo Nabadoon Cawad Aadan Maxamed.
Sidoo kale, Maxkamadda ayaa laba sano oo xabsiya iyo ganaax lacageed oo $1,000 Dollar, waxay ku riday Nabadoon Cabdicasiis Baydhabo iyo Nabadoon Maxamuud Aadan Rooble.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha Maxkamadda oo ku dhawaaqay xukunka, ayaa sheegay in shanta eedaysane ay ku caddaatay eedaymo ay kamid yihiin Kicin-dadweyne iyo sidoo kale aflagaaddo ka dhana madaxda Puntland.
Puntland oo xukun ku riday odayaal iyo siyaasiyiin ku xirnaa Boosaaso